Thenga i-2-Aminoisoheptane (28292-43-5) HPLC≥98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Abanye / 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
4.50 koku 5	ngokusekelwe ku 2 izilinganiso ikhasimende
SKU: 28292-43-5. Isigaba: Abanye
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu ukuya ku-2-Aminoisoheptane (28292-43-5), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-2-Aminoisoheptane, eyaziwa nangokuthi i-DMHA noma i-Octodrine, isisithako esithandwayo ekusebenzeni kwangaphambili nokushisa kwamafutha kusukela ekuqaleni kwe-2017. Kuyinto ekhuthazayo ekholelwa ukuthi ithuthukise amazinga akho omandla.I-2-Aminoisoheptane isakhiwo esifana kakhulu ne-DMAA. Kungokwemvelo kutholakala ngaphakathi kwegxolo le-English Walnut Tree (AKA. Juglans Regia) ....
2-aminoisoheptane Abalingiswa basisekelo
Formula Yamamolekhula: C7H17N
Isisindo somzimba: 115.22
Amagama Amakhemikhali: 2-aminoisoheptane
Amagama omdanso: DMHA, i-Octodrine
I-2-Aminoisoheptane, njengesivuselelo esisha esivame ukusetshenziselwa ukwesekwa kokuqala kokusebenza kanye namafutha ashisa. Lokhu konke ngenxa yethonya layo elibili eliphakanyisiwe lokukhulisa amandla nokucindezela ukudla.
Izinzuzo Zokuthuthukisa Amandla
I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) isheshe ithole ukuvelela amandla namandla ayo okukhulisa amandla. Lokhu kuye kwathandwa ngokukhethekile njengesengezo se-preworkout ngoba sinamakhono amaningana okuqinisekisa ukuthi uthola okuningi emisebenzini yakho yokusebenza: ukukhulisa amazinga wamandla (okwenza kube lula ukuziphoqa futhi uhambise okuningi, okusho ukuthi amakholori amaningi ashisa!), Isisusa esinamandla (amandla amaningi awasho lutho uma ungenaso isifiso sokusebenza), futhi isimo sengqondo esithuthukisiwe (uma uzizwa kahle ngesikhathi nangemva kokuzivocavoca kwakho kwenza kube lula ukuthi uzobuya futhi uyenze konke futhi). Ezinye izinzuzo zibandakanya ukubekezelelana okukhulu kobuhlungu 5,6, izinga lokunciphisa ukuhlolwa kwe-5,6, nokuthuthukisa i-bronchodilation i-3b, i-4b, i-5b-efika kahle uma iphakamisa izisindo, inamandla ngokusebenzisa i-spin noma i-HIIT ekilasini, noma ngisho nokuphazamisa izingane nendlu egcwele imisebenzi.
Enye yezingxenye ezinhle kakhulu nge-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) ukuthi lezi zinzuzo zikhawuleza ngokubonga ngesakhiwo sayo se-molecular. Ukwengezwa kweqembu le-methyl ku-carbon diabetri kwandisa ubukhulu bemiklamo - okwenza kube kokubili ukuqubutheka kwamanzi kanye ne-lipid-soluble. Ukwanda kwe-lipid solubility kukhulisa kakhulu ikhono layo lokudlula emkhawulweni wegazi wengqondo lapho likwazi ukusebenzisa amandla akhe okugxila ekuthuthukiseni nase-euphoric.8,9
Izinzuzo Zokulahlekelwa Isisindo
I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) ingasiza futhi ukukhulisa ukulahlekelwa kwesisindo ngenxa yokuthi ikhono layo lokunciphisa ukudla kanye nokuthuthukisa isimo sakho sengqondo ngokukhulisa amahomoni anesizathu sokwenza "ujabule" i-4b, i-5b (tshela ukuxilongwa kwesibindi okubangelwa ukucindezeleka uzizwa phansi!).
I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) inzuzo yokuthuthukisa imizwelo ivela ekukhoneni kwayo ukukhulisa i-dopamine namazinga omzimba we-norepinephrine, okuphethwe ukuvuselela ukuvuselela nokuvuka.3b, 4b, 5b, 6b. Ngokufana nokuhlelwa kwesakhiwo kanye nokuxhunywa ngokwemvelo ngokuphathelene ne-classical monoamine neurotransmitters, i-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) ingenza kusebenze i-receine i-receptor 1, ngenkathi ivimbela okwesikhashana ukuphindwa kabusha kwe-dopamine kanye ne-norepinephrine emndenini we-presynaptic - ukuthuthukisa "i-punch" yayo kanye nokukwazi ukuhlala njalo.
Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi be-DMHA baye babika umlenze wesibalo esiphezulu futhi banciphisa ukukhathala, ngaleyo ndlela bavumela abasebenzisi ukuthi bathole izinzuzo eziphezulu ekusebenzeni kwabo.I-2-aminoisoheptane (i-Octodrine) iphinde ikhuthaze ukwenza okuthile. Njengoba sekushiwo kakade, i-DMHA idala ukukhululwa kwe-dopamine. Amazinga e-Dopamine ashukumisa amazinga okugqugquzela kanye nokuthanda okulandelayo. Ukugqugquzelwa yisifiso sokufeza okuthile ngenkathi ukuzithandela kungukuzibophezela. Umuntu angase afise ukufeza into ethile, kodwa uma ehlangabezana nezithiyo endleleni, bangase bayeke. Kodwa-ke, uma umuntu enesifiso sokuziphendukela kwemvelo, angeke avimbele ngenxa yalesi sizathu aze afinyelele lokho abazimisele ukukwenza. Ngokuthakazelisayo, i-dopamine, okukhululwa kwayo okubangelwa ukudliwa kwe-DMHA, kuqinisekisa ukuthi unesizathu sokugqugquzela kanye nokufuna ukufeza imigomo yakho.
Ukuhlanganiswa kwemiphumela etholakalayo uma usebenzisa i-DMHA inikeza ukusekelwa okuphelele kokusebenza, ngakho-ke ukukhula kwayo kufakwe ezinhlobonhlobo zokusebenza okusekelwe, izisetshenziswa zangaphambi kokusebenza kanye neziphuzo.
Iyiphi isilinganiso se-2-aminoisoheptane
Akusekho izincomo ezisemthethweni zokulanda ezitholakala kule sithako. Kulukhuni ukutshela ukuthi zingakanani izinkampani ezikhuthazayo ezisetshenziswayo ngoba sezivele zihlanganisiwe kwimikhiqizo. Noma kunjalo, kungaba ukubheja okuphephile ukubeka okuthile phakathi kwe-100 kuya ku-300mg.
Khumbula njalo ukuthi i-2-aminoisoheptane ingasetshenziswa ngaphambi kokuzivocavoca, kodwa ingasetshenziswa futhi usuku lonke. Njengoba kuyishukumisayo, zama ukugwema ukuyisebenzisa ngaphambi kokulala ngoba ingaphazamisa isigqi sakho sokulala esivamile.
Ukuze usebenzise izakhiwo ezithuthukisa ukusebenza ze-2-aminoisoheptane (i-DMHA), kusetshenziswe kahle cishe amaminithi angu-15-30 ngaphambi kokuphuma. Ngaphandle kwalokho, uma isetshenziselwa kakhulu izidakamizwa zayo, i-2-aminoisoheptane (i-DMHA) ingasetshenziswa phakathi nosuku phakathi kokudla. Kodwa-ke, sincoma ukuthi uqaphele uma usebenzisa lesi sithako ngasekupheleni kwe ntambama noma kusihlwa, njengoba kunamandla okuvimbela ikhono lakho lokulala.
Indlela i-2-aminoisoheptane isebenza ngayo
I-2-Aminoisoheptane (i-DMHA) isebenza ngokufanayo ngendlela efanayo ne-DMAA ethandwayo. Ngokombono wokwakhiwa, ubudlelwane obuhle be-2-Aminoisoheptane (DMHA) buyaziwa ngokuthi yi-monoamine release release agents. Lezi zinhlanganisela ezinamandla okukhula kwama-monoamine athile. Lezi yi-dopamine ne-noradrenaline. Isebenza ngokuthuthukisa i-dopamine nokutholakala kwe-noradrenaline ngenkathi ngesikhathi esifanayo ukunciphisa i-reuptake ngokusebenzisa ukusebenza kwe-trace amine ehambelana ne-receptor. Lokhu kubambezela ikhono labo lokubopha emitholampilo yabo egcina lezi monoamines zisebenza isikhathi eside. Yingakho unomphumela ohlala isikhathi eside, oshukumisayo. Okunye okuvamile okubonwayo phakathi kwe-DMAA ne-2-Aminoisoheptane (i-DMHA) ukwengeza kweqembu le-methyl ku-carbon carbon elivimbela umphumela we-monoamine oxidase (MAO), kwandisa ubukhulu bemvelo yalesi sithako, kanye nokuhlangana kwayo kwe-catecholamine abathungi bezimoto.Ngokuthi lokhu kusho ukuthi ukuphila kwengxenye yenkimbinkimbi kuzoba isikhathi eside, kuzodlula umzila we-brain brain, futhi kuyoba nomthelela omkhulu wokuvuselela jikelele.
I-stimulants entsha ephuma ku-niche ye-bodybuilding ku-2016! Kuyinto i-2-aminoisoheptane, i-DMAA yakamuva yokuthuthukisa amandla nokucindezela ukudla. Isithuthukisi sokuqala sokusebenza komnyaka omusha sesisigxila sezinkulungwane zabaqashi bomzimba nabagijimi.
Nazi imiphumela emibi engaba khona nge-2-aminoisoheptane:
I-Dypsnea (Ukuphuza Okuncane)
I-2-aminoisoheptane i-Raw Powder
Ukuhlelwa okukhulu kungathunyelwa ezinsukwini zokusebenza ezingu-3 ngemuva kokukhokha.
Ingabe i-2-aminoisoheptaneIba nemiphi imiphumela emibi
Njengoba i-2-aminoisoheptane isanda emakethe yemidlalo yokudla, akukho miphumela emibi kuye kwabikwa. Singakuqhathanisa ne-DMAA. Imiphumela engafuneki efanayo engahle ibe khona ingenzeka ngezindlela eziphakeme ze-2-aminoisoheptane, isibonelo, ukushaya kwenhliziyo okuphakeme, ingcindezi ephakeme yegazi kanye nokuphefumula okunzima. Njenganoma yikuphi okukhuthazayo, kungcono ukuqala ngomthamo ophansi ukuze uthole ukufinyelela kokubekezelelana kwakho nokuzwela kuleyo ngxenye.
Indlela yokuthenga i-2-aminoisoheptane kusuka ku-AASraw
I-2-aminoisoheptane I-Raw Powder Recipes
I-Levothyroxine (T4) powder
Kulinganiselwe ngo- 4.50 aphume 5
I-Norethisterone Powder (68-22-4)